राष्ट्रपतिलाइ बुझाएको फाइल बालुवाटारमा कसरी पुग्यो ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
राष्ट्रपतिलाइ बुझाएको फाइल बालुवाटारमा कसरी पुग्यो ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहकी नेतृ पम्फा भुसालले आफूहरुले विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा दिएको पत्र बालुवाटर पुर्‍याइएको आरोप लगाएकी छन्।
गत मङ्सिर ३० गते सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश जारी गरेपछि सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवाद चर्किएको थियो। त्यसपछि असन्तुष्ट बनेको प्रचण्ड–नेपाल समूह संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वानको माग गर्दै समावेदन पत्र बोकेर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो। सोही पत्र राष्ट्रपति कार्यालयले दर्ता गर्नुको साटो बालुवाटार पुर्‍याएको नेतृ भुसालको आरोप छ। नेकपा नेता भीम रावल र भुसाल ८३ सांसदको हस्ताक्षरसहित मावेदनपत्र दर्ता गराउन शीतल निवास पुगेका थिए।